Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal महाभारतमा कम चर्चामा रहेकी भानुमती : दुर्याेधनले जबरजस्ती गरेका थिए विवाह | Aafno Khabar
महाभारतमा कम चर्चामा रहेकी भानुमती : दुर्याेधनले जबरजस्ती गरेका थिए विवाह
भानुमती महाभारतकी एक पात्र हुन् । उनी अत्यन्तै सुन्दर र बौद्धिक थिइन् । साथै शारीरिक रुपले बलियो पनि भएकाे चर्चा गरिएकाे छ ।
पौराणिक कथाअनुसार भानुमती काम्बोज नरेश चन्द्रवर्माकी छोरी थिइन् । राजाले भानुमतीको विवाहका लागि स्वयंवर समारोह आयोजना गरे । स्वयंवरमा शिशुपाल, जरासन्ध, रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण आदि भारतवर्षका अनेकौं राजाहरू निमन्त्रित थिए ।
भानुमती हातमा वरमाला लिएर आफ्ना दासी एवं अंगरक्षकहरूसँग आइन् र एकएक गर्दै राजाहरूलाई नियाल्दै अघि बढ्न थालिन् । दुर्योधन चाहन्थे भानुमतीले आफूलाई वरमाला पहिर्‍याइदिए हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन ।
हस्तिनापुर आएपछि भीष्मपितामहकाे आग्रहमा भानुमती पनि दुर्योधनसँग विवाह गर्न सहमत भइन् । उनीहरूले विवाह गरे ।
भानुमती र कर्णका बीच पनि गहिरो मित्रता बसेको थियो । उनीहरूबीच कृष्ण र द्रौपदीको जस्तै मित्रवत् सम्बन्ध थियो । दुवै असल मित्र थिए र यो कुरा हस्तिनापुरमा लगभग सबैलाई थाहा थियो ।
एकपटकको कुरा हो भानुमती र कर्ण बुद्धिचाल खेलिरहेका थिए । खेलमा कर्ण जितिरहेका थिए । त्यतिबेलै भानुमतीले दुर्योधन त्यहाँ आएको देखिन् र उठ्ने कोसिस गरिन् । कर्णलाई दुर्योधन आएको थाहा भएन, उनलाई लाग्यो भानुमती खेलमा हारिरहेका कारण उठेर भाग्न खोजिरहेकी छिन् । कर्णले उनलाई समातेर बसाउन खोजे ।
दुर्योधनलाई देखेर भानुमती र कर्ण दुवैजना डराए । दुर्योधनले गलत शंका गर्ने हुन् कि भन्ने डर थियो दुवैलाई । तर, दुर्योधनलाई कर्णमाथि पूर्ण विश्वास थियो । उनले छारिएका मोती उठाउन भने र जे कुरा गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ आएका थिए त्यही विषयमा कर्णसँग चर्चा गर्न थाले । दुर्योधनको यही विश्वासका कारण आफूबाट भएको घटनालाई लिएर शंका गरिनबाट कर्ण जोगिए ।
कतिपयले उक्त घटनालाई यसरी पनि वर्णन गर्छन् । दुईजना बुद्धिचाल खेलिरहेका थिए । भानुमतीले हारिरहेकी थिइन् र कर्ण खुसी भइरहेका थिए । यति नै बेला अचानक दुर्योधन आउन लागेको थाहा भएर भानुमती बसेको ठाउँबाट उठ्न खोजिन् । कर्णले हारेर भाग्न लागेकी हुन् भन्ने ठानेर भानुमतीको पछ्यौराको फेर समातेर बसाउन खोजे ।
अचानक भएको यो घटनामा भानुमतीको पछ्यौरा च्यातियो र त्यहाँ भएको मोती चुँडिएर छरियो । यति नै बेला कर्णले पनि दुर्योधन आइरहेको देखे । कर्ण र भानुमतीको अनुहार लाजले रातो भएको थियो । उनीहरू दुर्योधनले के भन्ने हुन् भनेर डराइरहेका थिए । दुर्योधन नजिक आउँदा पनि दुवैले उनको आँखामा हेर्न सकिरहेका थिएनन् । यत्तिकैमा दुर्योधनले भने मोती छरिरहन दिन्छौ कि म तिमीहरूलाई सहयोग गरौँ मोती उठाउन ?
-याे सामग्री हामीले भारतीय सञ्चारमाध्यम वेबदुनियाकाे सहयाेगमा तयार पारेका हाैँ ।
कोरोना अपडेट : ९ हजार २१० परीक्षण, १९४८ संक्रमित
कोरोना संक्रमण भयो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन !
काठमाडौंमा चल्न थाले सार्वजनिक सवारी–साधन (भिडियो)
उपत्यकामा व्यापार : कुन बार कुन पसल खाेल्न पाइने ?
रथ तान्दा भएको झडपमा प्रदर्शनकारीबाट यसरी निर्घात कुटिए ट्राफिक प्रहरी